कर उठाउन आजै निषेधाज्ञा खुकुलोको निर्णय, कुन–कुन क्षेत्र खुल्दैछन् ? – Nepali in Australia
June 7, 2021 autherLeaveaComment on कर उठाउन आजै निषेधाज्ञा खुकुलोको निर्णय, कुन–कुन क्षेत्र खुल्दैछन् ?
काठमाडौ । सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने भएको छ । महिनाको अन्त्यतिर कर उठाउनका लागि खुकुलो गर्न लागेको भन्दै केही अधिकारीहरुले नै गुनासो भने गरिरहेका छन् ।राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नउठाए कर्मचारीलाई बाँड्ने तलब नै संकलन हुँदैन । सबैभन्दा धेरै आन्तरिक कर उठ्ने ठाउँ नै काठमाडौ हो ।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
यसैले काठमाडौ उपत्यकामा कर उठाउनका लागि निषेधाज्ञा खुकुले पारिने भएको छ । मंगलबार काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक बस्दैछ ।अघिल्लोपटक कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि एक साता कडा निषेधाज्ञा जारी गरेका सीडीओहरुले आजको बैठकबाट निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउने निर्णयको तयारी गरेका छन् ।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले मंगलबारको बैठकमा पछिल्लो पटक लगाइएको निषेधाज्ञाको समीक्षा गर्दै निषेधाज्ञा अहिलेकोभन्दा केही खुकुलो र व्यवस्थित गर्नेबारे छलफल हुने जानकारी दिए ।काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग पनि परामर्श गरेर कोरोनाको ग्राफ विश्लेषण गरी थप निर्णय लिने बताए ।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
‘आज बस्ने बैठकमा कोरोनाको हालको अवस्थाका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग पनि परामर्श गरेर आवश्यक निर्णय लिन्छौं,’ पराजुलीले भनेका छन् ।तर भित्री कुरा चै सरकारको माथिल्लो निकायमा रहेका निकायले अनौपचारिक रुपमा कर उठाउन निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँन भनेपछि यो निर्णय लिन आँटिएको हो ।पछिल्लो पटक खाद्य पसलहरुमा समेत लगाइएको प्रतिबन्धले भिड धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आएको निष्कर्षमा अधिकारीहरु पुगेका छन् ।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
अब खाद्य सामग्री बिक्रीमा केही खुकुलो र व्यवस्थित बनाउनेबारे तयारी छ । सरकारी कार्यालयहरुपनि खुल्ला गर्ने तयारी छ । कोरोना संक्रमणको दर उच्च भएपछि उपत्यकामा शुक्रबारदेखि एकसाताका लागि निषेधाज्ञामा कडाइ गरिएको छ ।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकमा हाल संक्रमण दर केही घटेको देखिन्छ । तर कतिपयले परीक्षण नै कम भएकाले संक्रमितको संख्या पनि कम भएको बताउने गरेका छन् ।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
हरेक महिनाको २५ गतेभित्र कर बुझाई सक्नुपर्ने नियम छ । यसैले १५ गतेदेखि नै कम संख्यामा परीक्षण गरेर संक्रमित संख्या घटाईयो । अब ठिक ७ दिन खुकुलो बनाउने केही रकम कर संकलन भएपछि फेरी परीक्षणको दायरा बढाउने । संख्या धेरै देखियो भनेर फेरी निषेधाज्ञा गर्ने योजना सरकारी निकायको छ ।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
अब श्रीमानलाई दोश्रो विवाह गर्नबाट रोक्ने महिलालाई जन्मकैदको सजाय !
यस्तो देखियो उपत्यकामा निषेधाज्ञा कडा पारेको पहिलो दिन